မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: August 2011
နှစ်တစ်ဝက်ကျိုးခါနီးပါမှ …. ကျန်ရှိနေသေးသော နေ့နံသုံးမျိုးရဲ့ ကံဇာတာအနေအထားကို တင်ပြ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင်တော့ …. ရေးလိုစိတ် ..ခမ်းခြောက်လာလို့ပါ။ တစ်ခြားဆောင်းပါး တွေထက် လူအများစုကလည်း ဟောကိန်းတွေဆို ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဟောကိန်းတွေ တင်လိုက်တဲ့ နေ့ဆို … ဆိုဒ်မှာ စာဝင်ဖတ်တဲ့လူဝင်နှုန်းက နှစ်ဆလောက် မြင့်တက်သွားတာကို မြင်ရတိုင်း ဖီလင် ငုပ်မိ တာလည်း အမှန်ပါ။
Posted by Sayarphone at 9:02 PM Labels: နှစ်စဉ်ဟောကိန်းများ
သည်တစ်ခါတော့ …လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ပထမအကြိမ်တုန်းက မဆင်မခြင် နဲ့ လူဦးရေ မသတ်မှတ်ခဲ့မိတာကြောင့် အချို့သော သူများကို မစစ်ဆေးပေးနိုင်ခဲ့တော့ပါ။ အဲဒီ့လူတွေကို ဒီဆောင်းပါး ကနေတစ်ဆင့် တောင်းပန်ပါရစေ။
Posted by Sayarphone at 12:04 AM Labels: ဗေဒင်မေးကြမယ်ဆိုရင်
ကြံဖူးသမျှ အမည်မျိုးစုံ လူမျိုးစုံ စာစု (၂)
ဖုန်းလာနေတယ် … ဆိုလို့ ကျွန်တော် စာရိုက်နေရာက ထလိုက်ပါတယ်။ သမီးကြီးဖြစ်သူက ဖုန်းခွက်ကို ကိုင်ထားပြီး၊ ကျွန်တော်အနားရောက်လာမှ .. နယ်ကထင်တယ် ဖေဖေ လို့ ဆီးပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖုန်းကောက် ကိုင်လိုက်တော့ …. နယ်က ( မွေးရပ်မြေ) က အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦး ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
Posted by Sayarphone at 4:09 PM Labels: နာမည်အကြောင်း သိကောင်းစရာ